अतुलनिय योगदान गरेका कुलमान घिसिङ र डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिने – " कञ्चनजंगा News "
अतुलनिय योगदान गरेका कुलमान घिसिङ र डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिने
No Comments on अतुलनिय योगदान गरेका कुलमान घिसिङ र डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिने
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल जनप्रशासन संघले संयुक्त रुपमा प्रदान गर्ने ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ कुलमान घिसिङ र डा. सन्दुक रुइतलाई प्रदान गरिने भएको छ । वर्ष २०७३ बाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र २०७४ बाट तिलगंगा आखा अस्पतालबाट कार्यकारी निर्देशक डा. रुइतलाई प्रदान गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराईयो । आगामी शुक्रबार प्रदान गरिने पुरस्कारको राशी दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सम्मान छनौट समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले देशमा लोडसेडिङ हटाउन अतुलनिय योगदान गरेको भन्दै घिसिङ र आँखा उपचारमा अतुलनीय योगदानका लागि डा. रुइतलाई सम्मानका लागि योग्य भएको बताए । पुरस्कार उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको हातबाट शुक्रबार प्रदान गरिनेछ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका पूर्वमहाप्रर्वन्धक हेमबहादुर मल्लले २५ वर्ष कर्पोरेसनमा सेवा गरेका थिए । साल्ट ट्रेडिङलाई पहिचान योग्य संस्थाको रुपमा चिनाउन मल्लले निभाएको भूमिकाको सम्मान गर्दै यो सम्मानको गठन गरिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । २०५९ सालमा स्थापना भएको सम्मान हालसम्म १३ जनालाई प्रदान गरिसकिएको छ ।
ब’ढेको प्याजको मूल्यले ऋणमा चु’र्लुम्मै डु’बेका किसानलाई ऋणबाट मु’क्ती मात्र दिएन, एक महिनामा नै करोड पति बनाएको छ । प्याज उत्पादनबाट करोडपति बनेका किसान हुन भारतको चि’त्रदुर्गा जिल्लाका किसान मल्लि कारजुना । प्याजको भाउ ब’ढ्नुअघिसम्म ४२ वर्षका मल्लिकारजुना ऋणमा चु’र्लुम्मै डु’बेका थिए । तर त्यहि समयमा उनले ऋण लिएर प्याजका विरुवा रोपे ।
उनका अनुसार यो उनले लिएको ठुलो जो’खिम थियो ।‘उक्त समयमा प्याजको मूल्य घ’टेको वा प्याज खेती अ’सफल भएको भए म ऋण न’तिरेको आरोपमा पक्राउ परिसक्थे। अहिले प्याजले मेरो परिवारको भविष्यमा आ’मूल प’रिवर्तन ल्याइदियो’ उनले भने । उनले प्याजको भाउ २ सय रुपैयाँ भारु हुँदै गर्दा २ सय ४० टन प्याज स्या’हारेका थिए । उनले ५ देखि १० लाख भारु फाइदा बनाउने आशासहित १५ लाख भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।
तर उनको फाइदा करोडमा पुग्यो ।उनी अहिले चित्रदुर्गा क्षेत्रमा रहेका किसान समूहका सेलि ब्रेटी बनेका छन् । ‘मैले मेरो सबै ऋण तिरिसके, अब म घर बनाउने सोचमा छु। म आगामी वर्षमा खेती वि’स्तार गर्नका लागि थप जमिन किन्न चाहान्छु ।’ उनीसँग अहिले करिब ५० जना कामदार रहेका छन् । गत अक्टुबरसम्म उनी तनाबमा थिए किनकि त्यतिबेला प्याजको मूल्य कम थियो ।
उनले नोभेम्बरको पहिलो साता प्याज बेच्दा प्याजको मूल्य प्रति क्वीन्टल ७ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसको केहि दिन पछि मूल्य ह्वात्तै बढेर प्रति क्वीन्टल १२ हजार पुग्यो । त्यसपछि त उनको परिवारलाई चो’रबाट प्याज जो’गाउन खेती भएको ठाउँमा गा’र्ड बस्नु पर्ने बा’ध्यता भयो ।पानीको स’मस्याका कारण उक्त क्षेत्रका किसानले प्राय बर्षायाममा मात्र प्याज खेती गर्छन । प्राय सबै खेतीका लागि पानीको स्रोत बर्षा हो ।
गत वर्ष प्याजबाट ५ लाख मात्र फाइदा गरेका उनी अहिले करोडपति बनेकोमा निकै ह’र्षित छन् ।करोडपति बन्नुमा उनको प्याज खेती र प्याजको भाउ मात्र नभई उनी प्याज बेच्ने क्रममा म’ध्यस्तकर्ता वा द’लालबाट न’फसेको समेत धेरैको तर्क छ।साथै यो पाठ अन्य किसानले पनि सिक्नुपर्ने धेरै जनाको प्र’तिक्रिया रहेको छ।
← यो हो विश्वको सबै भन्दा महँगो कार, जस्ले ३ मिनेटमा १०० किलोमिटरको यात्रा तय गर्छ ! → एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले यस वर्ष सम्पत्तिमा १८ खर्ब रुपैयाँ थपे